Taliyaha Danab oo Xabsiga Dhexe loo wareejinayo | KEYDMEDIA ONLINE
Taliyaha Danab oo Xabsiga Dhexe loo wareejinayo
Macluumaadka ay Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in Taliyaha la qorsheynayo in loo wareejiyo xabsiga Dhexe oo ah halka la geeyo dadka lagu helo dembiyada culus sida xubnaha shabaabka ah ee la xukumo iyo kuwa kale.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa isi soo tarayo walaaca laga muujinaya xariga Taliyaha Komaandooska Soomaaliya Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo haatan u muuqdo mid nafsadiisa halis la geliyay, sida ay Keydmedia Online ka ogaatay Militeriga Soomaaliya.
Xariga Taliyaha ayaa yeeshay wejiyo badan iyo arrimo Qabiil oo ku xeeran Siyaasadda khalafsan ee Soomaaliya, waxaana Macluumaad ay Keymedia Online sheegayaan in arintaan uu si toos ah uga dambeeyo Madaxweyne Farmaajo oo dagaal kula jiro saraakiisha ku heybta ah ama saaxiibka la ahaa Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Kheyre.
Keydmedia Online oo arintaan daba-gal ku sameysay ayaa ogaatay in arrimaha lagu heysto Taliye Cabdimaalik ay qeyb ka yihiin isfaham waa soo kala dhex-galay isaga iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Gen. Odawaa Yuusuf Raage. Macluumaadka Keydmedia Online heshay ayaa sidoo kale sheegaya in Taliyaha la qorsheynayo in loo wareejiyo Xabsiga Dhexe.
Madaxweyne Farmaajo oo ka faa'iideysanaya marxaladda kala guurka ah ee uu dalka galay ayaa bilaabay in uu darajooyin ka safo saraakiisha ay xigtada yihiin, kuwaas uu qaarkood boos uga raadinayo xilalka saraakiisha uu ugaarsanyo, islamarkaana xilalka ka qaadayo.
Guddoomiyaha Beelaha Hawiye Nabaddoon Maxamed Xasan Xaad ayaa dhawaan fariin digniin ah u jeediyay Madaxweyne Farmaajo, isagoona sheegay in Taliyaha la doonayo in la shirqoole, balse taasi hadey dhacdo raga talada dalka ay saameyn xun la kulmi doonaan.
10 sano kadib, jidka KM4 iyo Tarabuunka oo la furay
Warar 26 October 2020 20:59
Tan iyo markii Rooble xafiiska yimid todobaadyo kahor, waxay dowladda billowday furista wadooyiinkii xirnaa, iyadoo la dareemay nafis dhanka isku socodka oo horey ciriiri uga jiray.
Taliye Xijaar iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo kulan gaara yeeshay
Warar 26 October 2020 20:53
Ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo xabsiga utaxaabay Fannaan da’yar
Warar 26 October 2020 20:09
Rooble iyo James Swan oo kulan gaar ah yeeshay
Warar 26 October 2020 18:04